onyinye 3 afọ 5 ọnwa gara aga #25
Ị na-anabata kaadị OR igwe ndọrọ ego Cards maka onyinye?
Site na ihe m na-aghọta ihe, ya anya ka m ga-eziga gị a onyinye via USPS Mail. M na-agbazi?
onyinye 3 afọ 5 ọnwa gara aga #26
M ugbu a nwere KLAX, ọ arụnyere mfe! SOoooooo Ị nwere ọzọ ofufe !!!!
onyinye 3 afọ 5 ọnwa gara aga #28
Daalụ maka ozi gị, anyị na-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inye onyinye i nwere ike iji anyị na usoro ebe a http://www.rikoooo.com/more/donate
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: Gh0stRider203, hedupitsbutt
onyinye 3 afọ 5 ọnwa gara aga #80
hedupitsbutt dere, sị: M ugbu a nwere KLAX, ọ arụnyere mfe! SOoooooo Ị nwere ọzọ ofufe !!!!
I nwere ike dị ka Me ...... Rikoooo riri ahụ hehe
onyinye 3 afọ 4 ọnwa gara aga #173
anyị nwere ike inye onyinye a otu akụkụ nke superskullmaster si mmewere nwere a usoro dị ka Chuka si ??? ^ _ ^ (Ọ na-ama kwuru na ya ga-enye otu akụkụ. M ga-enye ndị ọzọ nwere onye dị ka ya oke akpa ọchị)
Oge ike page: 0.243 sekọnd